AirTags waxay arki laheyd iftiinka maalinta dhamaadka sanadka. Shirkadda Cyrill Oo Iibineysa Qalabka Qaar | Waxaan ka socdaa mac
AirTags waxay arki laheyd iftiinka maalinta dhamaadka sanadka. Shirkadda Cyrill waxay ku dhejineysaa qaar ka mid ah qalabyada iibka hore
Waxaan joognay muddo dheer ka hadlaya AirTag iyo goorma ayey noqon doontaa daqiiqadda ay Apple u dooratay inay ku soo bandhigto suuqa. Weli ma hayno xaqiijin rasmi ah oo ah goorta ay taasi dhici doonto, laakiin waxaan ku kalsoonaan karnaa inay noqon karto dabayaaqada sanadkan. Rubuc-dii ugu dambeysay ama sidaa waxaan aaminsanahay haddii aan eegno qalabka ay shirkadda Cyrill horey ugu haysatay ka hor iibinta AirTags.
Waxaan horeyba u isticmaalnay inaan aragno sida ugu dhow isla waqtigaas wax soo saarka cusub ee Apple loo bilaabay, waxaan haynaa qalab dhinac saddexaad ah oo loogu talagalay aaladdaas isla waqtigaas. Taasi waxay ka dhigan tahay in shirkadaha ay hayaan macluumaad aad u badan oo casri ah oo ku saabsan goorta la soo saarayo waxsoosaarka tufaaxa. Tusaale ahaan Shirkadda Nomad. Laakiin sidoo kale waxaan leenahay ilaa Cyrill, takhasus u leh qalabka telefonka iyo aaladaha teknolojiyada, waxay leedahay qalab horay loo sii iibiyay oo loogu talagalay AirTags, waxay ka dhigan tahay imaatinkiisa suuqa inuu ku dhow yahay.
Si kastaba ha noqotee, waa inaad si dhow u eegtaa daabacaadda ganaaxa. Waan aragnaa taas shixnadaha waxaa la sameeyaa dhammaadka Oktoobar. Laga soo bilaabo wixii aan ka ogaan karno in Apple ay u badan tahay inay soo saarto AirTags caan ah dhamaadka sanadka. Si gaar ah si gaar ah rubucii la soo dhaafay.
Qalabku laftiisu waa kiis yar oo keychain-style kiisa loogu talagalay in lagu hanto xanta Apple "AirTags." Liisku wuxuu u oggolaanayaa macaamiisha inay horay u dalbadaan $ 20. Waa run in soo saaraha Waxay ku dhigaysaa sharraxaadda inay tahay nooca 2020. Waxay noqon kartaa qalad sababtoo ah waxaan horeyba u joognaa dhamaadka bisha Janaayo waxayna ahayd in la saxo. Uma maleynayo in shirkadu ay kaga tagayso sheygaas shabakada. Qalabka waxaa lagu iibiyaa laba midab (madow iyo dhagax) waxaana lagu qeexay shirkadda:
Kiiska suunka maqaarka ee veganant. Qalab dhammaystiran oo loogu talagalay dadka yaryar. Xiritaanka badhanka wuxuu hayaa AirTag-kaaga si aamin ah. Ku sudh booskaaga AirTag boorsadaada, furahaaga, boorsadaada, oo leh dahab goos goos ah oo qurxoon oo carabi-karaab ah. La jaan qaada lacag bixinta wireless. CYRILL Kiiska aasaasiga ah ee suunka maqaarka loogu talagalay Apple AirTag (2020).
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Xanta » AirTags waxay arki laheyd iftiinka maalinta dhamaadka sanadka. Shirkadda Cyrill waxay ku dhejineysaa qaar ka mid ah qalabyada iibka hore
Apple Watch waxay badbaadisaa nolosha baaskiil ku nool Boqortooyada Midowday